South African Zulu Umbala omuhle we-aluminium owenziwe ngombala ovuthayo ophahleni ophahleni ophahleni owenza uphahla
Umbala oboshiwe obala odwetshiwe unemibala emihle nombala ogqamile. Isetshenziswa kabanzi ensimini, efektri, ehhotela, ehotela, ehholo lokubukisa, eholidini, ezinqabeni zasendulo nasezindaweni zanamuhla.
Umbala owenziwe ngombala owenziwe ngombala ovuthayo odayiswayo umshini owenza umshini wokuthengisa uthengisa ikakhulukazi emazweni amaningi. Bathanda ishidi eligobile elikhazimulayo eliketshezi lokuthumba indlu.
Umbala ovuthayo odwetshiwe odweba obala ngaphambi kokugubha i-coil ingu-1250mm, izinto ezisetshenziselwa ukugcizelela izinto ezenziwe nge-PPGI.
Umbala ogcwele obala obala odweba odweba umshini wokufaka umshini wokufaka umshini ufaka i-decoiler, umshini wokwenza umqulu, uhlelo lokulawula ikhomputha kanye ne-table out.
IMINININGWANE YEMINININGWANE YENGINGO YOKUTHUTHA UKUFAKA KUWEBSITE WETHU
Ukwamukeleka ngokwezifiso, uma ungatholi imikhiqizo yakho isidingo ku-website yethu, ngicela ungibonise umdwebo wakho wesidingo, lapha sakha ithimba lizoqeda futhi likunike impendulo eyodwa enelisekile.